राम्रो आफ्नै भेषभूषा
२०७६ कार्तिक २१ बिहिबार, दमौली । जातीय वेषभूषामा सजिएका तनहुँको दमौलीस्थित मगर समुदायका युवती । जिल्लामा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा युवतीहरु आफ्नै वेषभूषामा सजिने गर्दछन् । रासस ... बाँकी अंश»
सुर्योदय नगरपालिकाले हान्यो युवाको पेटमा लात
२०७६ कार्तिक २० बुधबार, इलाम । समृद्धिका चर्का कुरा गर्ने सुर्योदय नगरपालिकाले स्वरोजगार बन्न कम्बर कसेर लागेका युवाहरुको रोजगार बन्ने सपनामा प्रहार गरेको छ । पाँच लाख भन्दा माथी कर्जा दिएर अटो खरिद गरेका युवाहरुको अटो प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेपछि युवाहरुको स्वदेशमै गरिखाने सपना भत्किएको हो । ... बाँकी अंश»
बाजुरामा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमवीच समायोजन
२०७६ कार्तिक २० बुधबार, उक्त समितिमा प्राय दलित र महिलाहरु रहेको वताइएको छ भने पार्टी सभापति कविराज पण्डितको संयोजकत्वमा उच्च स्तरिय निर्देशक समिति समेत गठन गरिएको सचिव शाहले बताएका छन्। यसरी बाजुराको एकवटा स्थानमा मात्र उपनिर्वाचन हुने भएकोले आ आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउन दुई पार्टी बिच निकै प्रतिस्पर्धा हुँने देखिएकोले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई बिजयी गराउन तरुण युवालाई समेत परिचालन गर्न बिद्याथीी नेता वीरेन्द्र गीरीको संयोजकत्वमा तरुण बिद्यार्थी परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
कार दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु, दुई घाइते
२०७६ कार्तिक २० बुधबार, अर्घाखाँची । सन्धिखर्कको नरपानीमा कार दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडकखण्डको नरपानीमा बिहान बा १७ च ६९१७ नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रकाश महत्राले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
भुम्लु गाउँपालिकाले हरिबोधिनी एकादशीमा दियो सार्वजनिक बिदा
२०७६ कार्तिक २० बुधबार, काभ्रेपलाञ्चोक । भुम्लु गाउँपालिकाले यही कात्तिक २२ गते हरिबोधिनी एकादशीका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गाउँपालिकाका बासिन्दालाई स्थानीय पर्वमा सहभागी हुन अपिल गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । ... बाँकी अंश»
मानिसमाथि स्यालको आक्रमण, १६ घाइते
२०७६ कार्तिक २० बुधबार, लहान । स्यालको टोकाइबाट सिरहाको लहान नगरपालिका–४ स्थित कुमहार टोलका १६ घाइते भएका छन् । बहुला स्याल बस्तीमा प्रवेश गरी स्थानीयवासीलाई टोकेको हो । ... बाँकी अंश»
यी हुन् साकेलाका उम्मेदवार
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, खोटाङ । साकेला गाउँपालिका–३ खिदिममा वडाध्यक्षका लागि हुने उपनिर्वाचनमा तीन दलले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छन् । ... बाँकी अंश»
कास्की २ मा तीन महिलाको भिडन्त
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, चिप्लेढुङ्गा । देशभरिबाट निकै चाखपूर्ण रुपमा हेरिएको कास्की क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनमा आजसम्म तीन महिलाको उम्मेदवारी रहेको छ । हालसम्म नेकपासहित तीन दलले आफ्नो उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसकेका छन् । जसमा नेकपा (नेकपा) ले विद्या भट्टराई उम्मेदवारको घोषणा गरेको छ । ... बाँकी अंश»
१६ गाँउलेलाई बहुला स्यालले टोक्यो, गाउँ आतंकित
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, घाईते हुनेमा ७० वर्षिय रामबालक पण्डित ,४५ वर्षिय सोनाई मेस्तर , ५ वर्षिय मो. रेहान , ५५ वर्षिय गुलाब देबि महतो छन् । समान्य रहनेमा संन्जु देबि महतो , प्रदीप महतो,सुरज कुमार दास,नन्दनी मेस्तर ,रबिना कुमारी मेस्तर,संजीव कुमार दास लगायतका ब्यक्तीहरु रहेका वाडा अध्यक्ष रामनाथ पण्डितले बताए छन् । ... बाँकी अंश»
हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, नगरपालिकाभित्र रहेको नेपालकै चार नारायण मध्येको कान्छो नारायण मन्दिरको नाममा परिचित तथा राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा सूचीकृत इचङ्गुनारायण मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष हरिबोधिनी एकादशी (तुलसी विवाह) का दिन विशेष मेला लाग्ने भएको हुनाले नगरपालिकामा स्थानीय पर्वको रूपमा सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको उप–प्रमुख अधिकारीले बताए । ... बाँकी अंश»
सिडियोहरुमा उत्कृष्ट कुरुम्बाङ् पुगे स्याङ्जा
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, भ्रष्टाचारका बिरुद्ध पत्रकार साथीहरुले कलम चलाउन भन्दै कुरुम्वाङ्ले पत्रकारको सुरक्षामा आफुले कुनै कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मिडिया र कर्मचारी मिलेर काम गर्न आफु तयार रहेको उनले बताए । जनप्रतिनिधीहरुले कार्ययोजना बनाउने, बजेट ल्याउने हो प्रजिअ कुरुम्बाङ्ले भने,“त्यसको कार्यन्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव हामी सगँ छ ।” भष्ट्रचार आफुले पनि नगर्ने र अन्यबाट भएको थाहा पाए नछाड्ने मेरो पहिलो काम हुने उनले बताए । पैसाको लेनदेनलाई मात्रै भष्ट्रचार हो भन्ने मेरो मान्यता छैन सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा तलमाथी गरेपनि भष्ट्रचार गरेको ठहर हुने छ यसका लागि जिम्मेवार रहन आग्रह गरे । ... बाँकी अंश»
आफन्तको यादमा टोलाउदै ८० वर्षीय वृद्ध
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, स्याङ्जा । आफन्तको यादमा झुप्रो घरमा टोलाउदै ८० वर्षीय वृद्ध देविलाल जिटी । गल्याङ नगरपालिका ९ स्थित गेजाका जिटी साहारा दिने कोही नहुँदा बिरामी भएर उपचार गर्न नसकेपछि सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
हात्तीको समूहले भान्साघर भत्काइदियो, अन्न खाइदियो
२०७६ कार्तिक १९ मंगलबार, सप्तरी । कञ्चनरुप नगरपालिका–६ जमुवामा सोमबार हात्तीको समूहले स्थानीयवासी धनेश्वर चौधरीको भान्साघर भत्काएको छ । ... बाँकी अंश»
हृदयघातबाट दुई वडासदस्य गुमाएको नेकपाले टुङ्ग्यायो उम्मेदवार
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, मगरले ३८४ मत प्राप्त गरेका थिए थियो उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका मुक्तबहादुर थापा मगरले १५४ मत प्राप्त गरेका थिए। वडाध्यक्ष मगरको निधनपछि नेकपाबाटै वडा सदस्य जितेका कुलसिंह रानालाई कार्यवाहक दिइएको थियो । उनको पनि गएको भदौ महिनामा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो । ... बाँकी अंश»
कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका संसद वलीको स्थानमा धर्मपत्नी बिमला उम्मेदवार
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, नेकपाले दाङ क्षेत्र नं ३ को (ख) मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि बिमला वलीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका वली सो क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य स्व उत्तरकुमार वलीकी धर्मपत्नी हुन् । वलीको गत फागुनमा प्रदेशसभाको बैठकबाट फर्कने क्रममा आफ्नै कार दुर्घटना हुँदा निधन भएको थियो । ... बाँकी अंश»
इन्द्रावती–८ मा नेकपा र कांग्रेसको उम्मेदवार टुङ्गो
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, सिन्धुपाल्चोक । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर १४ को उपनिर्वाचनका लागि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–८ को वडाध्यक्षको उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका छन् । यसअघि निर्वाचित अध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठको मृत्युपछि उक्त वडामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । ... बाँकी अंश»
कहाँ गयो स्थानीय सरकार ? एउटै जिल्लामा ८४ मध्ये ७२ वडा सचिवविहीन
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, बैतडी । बैतडीका ८४ वडामध्ये ७२ वडा सचिवविहीन भएका छन् । वडामा सचिव नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, मेलौली नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाका एउटा वडामा पनि सचिव छैनन् । ... बाँकी अंश»
फौजी किरा अवलोकन गर्दै फौज
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, बेझाड । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१० मा धान बालीमा लागेको फौजी किराको अवलोकन गर्दै कृषि शाखा रामपुरका प्रमुख रामहरि पाण्डे र प्राविधिक सुशील अधिकारी । ... बाँकी अंश»
काभ्रेमा वडाध्यक्षको उम्मेदवारसमेत छान्न सकस
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, काभ्रेपलाञ्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकलाई एक स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार छान्न निकै सकस परेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ कार्तिक १८ सोमबार, गलेश्वर । म्याग्दीको पर्यटकीयस्थल टोड्केमा मुला बिक्रीका लागि देखाउँदै महिला । टोड्के मुला खेतीका लागि प्रशिद्ध छ । ... बाँकी अंश»